Afaan Qawwee jalatti nagaan hinyaadamu, hinargamus! -
Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Gurraandhala 1,2020
Waraanni mootummaa ajjeechaa fi gubiinsa bosonaatti bobba’ee jiru uummata nagaa keessaa hatattamaan akka kaafamu gaafanna. Kana keessatti dhaabbileen siyyaasaa Oromoo uummata qabsaa’aafii jiran, uummata ijaaramaniif Oromoof birmatnaa taasisuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa akka gochuu qaban miira Oromummaan dhaamnaaf! Dabalataan dhaabbileen mirga namoomaa dirqama isaanii olaanaa akka bahatan gaafanna!
Uummatni keenya nageenyi isaa mirkanaa’ee lafaaf qabeenya isaa barbadeessuun akka irraa dhaabbatu gaafanna! Kan araddaaf qee’ee lakkise bakkatti akka deebi’u, xiinsammuun saba keenyaa kan miidhame akka suphamu gaafanna.
Waraanni mootummaa yakka godaansa bineensa Bosonaa Oromiyaaf saaxilu raawwataa jiran. Daddaffiin gocha fokkataa itti jiran kana irraa akka dhaabbatan gaafanna!
Uummatni Oromoo wal tiksuu, wal humneessuu fi nageenya walii isaa mirkaneessuuf ajaja qaama kamiif abdii qaama halagaa irra utuu hingodhatin ofiin wal ta’ee gocha Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuu fi daangaa hanga godhatutti qabsoo isaa jabeessuu akka qabu gaafanna!
Labsii waraanaa seeraan alaa komaand post’n godinaalee Oromiyaa irratti labsamanii jiran irraa akka ka’an gaafanna. Kana irratti dirqama saa uumatni dhaabbileen siyyaasaa Oromoo gamtaa’inaan akka bahatu gaafataa, uummatnis waan irraa eegamu akka raawwatu gaafanna!
Waraanaan gochaa uummata keenya irratti raawwataa jiru akkuma dhaabni keenya ABO’n gaafatetti qorannaan walabaa akka addunyaatti taasifamuu akka qabu dirqama nurraa eegamu nii baana. Qorannaan kunis bifa haqa ta’een akka gaggeeffamuu fi uummata du’aa jiruuf birmatnaan hatattamaa akka taasifamu gaafanna.
Barataa Oromoo barnoota irraa ari’an barnoota isaaniitti akka deebisu gaafataa, barataa naannoo Amaaraatti ajjeefame, qaama ajjeese qoratee seeratti akka dhiyeessu hubachiifna. Dhimma kana duuka Oromoon bu’uu akka qabu dhaamna.
Maayii irratti afaan Qawwee jalatti nagaan hinargamu nagaanis hinyaadamu jedhee kan amanu Qeerroon Bilisummaa Oromoo, mootummaa irree isaa abdatee, Meeshaa waraanaa addunyaa irraa argatuun baaragee waraanaan gadi of dhaabuuf tattaaffii gochaa jiru dhaabee karaa nagaaf marii wal amantaa qabuun rakkoo jiru furuuf dirqama irraa eegamu akka bahatu gaafanna. Kun hafee waraanaan uummatan injifadha jedhee adeemsa eegale kanaan xuqatee dargaggeessaaf uummata Oromoo ofitti kakaasaa akka jiru hubachuu qaba. Nagaaf dimokiraasiin akka dhugoomu akkuma gaafataa turre gaafanna!.
← Dhiittaan Mirga Dhala Namaa Mootummaa Itoophiyaatiin Gaggeeffamaa Jiru Qorannoo Walaba Sadarkaa Addunyaa (International Investigation) Barbaada OMN: Qeerroo Oromiyaa Lixaarraa Gambeellaatti Baqatan, Guraandhala 01, 2020 →